Yemen: Vonomoka Nandeha Mivantana Tamin’ny Aterineto · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 19 Septambra 2011 17:59 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, Português, Nederlands, Deutsch, বাংলা, Ελληνικά, Aymara, English
Ity lahatsoratra ity dia ampahany amin'ny fandrakofanay manokana ny Hetsi-panoherana Yemen 2011.
Vonomoka iray no nojerena maso mivantana , isak'izay bitsika nalefa, tao Sanaa renivohitr'i Yemen. Ny tafika mitam-piadiana Yemenita dia nitifitra ireo mpanao hesi-panoherana, nahafaty olona 22 raha kely indrindra ary naharatràna an-jatony maro hatreto. Mandeha mivantana amin'ny alalan'ny live feed ilay zava-mahatsiravina, ary hitan”ireo mpijery an'aliny maro izay tohina nanerana ny tany.
Habibiana tafahoatra no hita tamin'ilay “livefeed” araka ny nambaran'ireo nahita azy.
Mpahao fihetsiketsehana naratra teo amin'ny lohany taorian'ny fanafihana nataon'ny mpitandro filaminana avy amin'ny governemanta, mandray ny fitsaboana atao azy eo amin'ny toeram-pitsaboana/Maoske napetraka vonjimaika tao akaikin'ny Anjerimanontolon'i Sanaa. Sary avy amin'i Luke Somers, copyright Demotix (18/09/2011)
Mitatitra ireo mafana fo eo amin'ny sehatry ny virtoaly:
@virtualactivism: Milaza ny iraka any an-toerana fa nisy nitondra teo aminy ny lohan’ olona iray nivantanan'ny roquette nalefa tamin'ny RPG & fa nisafidy ny tsy hamoaka ilay sary nandritra ny fampitàna mivantana izy #yemen
Omar Mashjari mamoahafantatra antsika hoe:
@OmarMash: nanafika mpanao fihetsiketsehana am-pilaminana ary nikendry ireo tanora tovolahy teny amin'ny lohany ny RPJ. Tsy misy toa azy ity halozàna ity. #Yemen #SanaaMassacre
Fanampiana ireo Yemenita mpanao hetsi-panoherana, naratra, mandram–piandry ny fiara mamonjy voina, nandritra ny fifandonana taorian'ny hetsika am-pilaminana tao Sanaa renivohitra. Sary avy amin'i Saleh Maglam, copyright Demotix (18/09/2011).
Iyad El Baghdadi dia manamafy:
@iyad_elbaghdadi: Voamarina: fitaovana fanoherana fanafihana an'habakabaka no nampiasain'ireo mpomba ny fitondrana tao #Yemen androany hanoherana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy nisy afa-tsy tanam-polo. 22 no maty, “an-jatony” naratra. #Sanaa #Massacre
@earthtoinadine: Ny Yemenita no vahoaka tena isan'ny mitàna fitaovam-piadiana indrindra, nefa dia nijanona ho mpandàla hatrany ny filaminana ry zareo nanoloana ireo habibiana efa ho am-bolana maro. Monkon-doha izany.
Ary ilay Maoritaniana mafàna fo, Nasser Weddady dia mamintina hoe:
@weddady: Raha ny hita nandritra ireo volana lasa te aloha, ny vono olona tao #Yemen androany dia tsy hafa fa vokatry ny tsy firaikàna iraisam-pirenena
Miaraha aminay mba hahazo vaovao misimisy kokoa momba an'i Yemen.